အိုင်တီ | Hap Eye
အမြဲတမ်းကို ကြားကြားနေရတဲ့ Custom Rom ဆိုတာ
အိုင်တီ / 2019-06-19
အရင်ဦးဆုံးပြောရရင် rom လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတော်တော်များများက storage လို့ခေါ်တဲ့memory ကို ပြေးမြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုပြောပြနေတဲ့ Custom Rom နဲ့မတူပါဘူး။ custom rom ဆိုတာ developer တွေတီထွင်ထားတဲ့ rom အမျိုးအစားပါပဲ။ နည်းနည်း ရှုပ်သွားပြီထင်တယ်။
သင့် ရဲ့computer သုံးရတာလေးနေပြီဆို ဒီလိုလေးတွေလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။
အိုင်တီ / 2019-06-14
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အားလုံးလည်း ဝေေ၀ဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ RAM ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Snapdragon ဆိုတာ ဘာလဲ.......?
အိုင်တီ / 2018-11-16
Snapdragonဆိုတာ တပိုင်းလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ချစ်ပ်ပြားလေးပေါ်မှာ Systemတစ်ခု(SoC)ကို တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် Qualcomm နည်းပညာကုမ္ပဏီက (၂၀၀၇)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Benefits for Small Business in 10 ways from SEO
သုတ, အိုင်တီ / 2018-09-24
Today, 21st century, more and more Business websites are launching on Internet and marketing online. Here, we describe the benefits thatasmall business can be apart with SEO ...
Best Ways to promoteaTravel Website in 2018
သုတ, အိုင်တီ / 2018-09-19
သုတ, အိုင်တီ / 2018-08-21
သင်၏ Website သည် စွမ်းရည်ထက်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ရေးဆွဲထားသော Website တစ်ခုသည် သင့်လုပ်ငန်းတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းအားသာချက်ကို ရရှိစေပြီး လုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
Candle ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်း (5)
အိုင်တီ / 2018-08-15
ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့ ဖယောင်းတိုင်ပေါ်မှာ ကနုတ်ပန်းလေးများ ရေးထိုးသည့်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်ပေါ်မှာ ကနုတ်ပုံစံလေးတွေကို ဖော်ဖို့အတွက် New Layer ကို ထပ်မံရယူထားပါ။ ပြီးနောက် Text Tool ကိုယူပြီး ကနုတ်ပန်းပွင့်လေးတစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ပါ။
Candle ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်း (4)
အခု ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ ကိုယ်ထည် ပြင်ဆင်လို့ ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် မီးစာကို ထည့်သွင်းရပါမယ်။ Layer အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။ လေးထောင့်ပုံစံ Rectangular Marquee Tool ကိုယူပြီး အောက်ပါပုံအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။ သူ့ရဲ့ Gradient အရောင်တွေကတော့ အနက် ၊ အနက်၊ အနီ သုံးခု ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
Subscribe to အိုင်တီ